Bichon Poodle: Baro Eyga xiisaha badan ee jecel
Maxaad heleysaa markaad ka gudubto Bichon Frize Poodle? A eyda orso isku dhafan! Waa kuwan wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato isku-dhafka 'Bichon Poodle fluffy'.
Adhijirka Jarmal Madow: Tilmaamaha Loogu Talagalay Eygan Rare
Waxaa jira waxyaabo badan oo ku saabsan Adhijirka Jarmalka Madow ee ka badan muuqaalkiisa wanaagsan - eey weyn oo shaqeynaya iyo xayawaanka qoyska, sidoo kale. Akhriso si aad waxbadan uga barato cananahan cajiibka ah.
Madoobayaasha Dahabka Madow: Maxaad Gabi ahaanba u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Weligaa ma aragtay Casri madow oo madow oo aad la yaabtay sida dhulka Dahab ugu noqon karo madow? Runta ayaa ah, ma awoodo. Haddii aad aragto Dahab dhammaan madow ah, waxay u badan tahay inuu yahay nooc kale oo lamid ah sida Flat-Coated Retriever. Laakiin taasi micnaheedu maahan in Soo Celiyayaasha Dahabka ah aysan yeelan karin calaamado madow. Dhammaantood waxay ku yimaadeen iyaga ... Sii akhri
Aasaaska Taranka: Afka Madoow ee Cur
Afka Madoow eeygu waa eey ugaarsi ugaarsi ah oo xayawaan qoys ciyaarsiiya sidoo kale. Akhriso si aad waxbadan uga ogaato nuucaan firfircoon.
Shaybaarada Madow ma sameeyaan ugaarsadayaasha ugu fiican?
Shaybaarka Madow waxaa badanaa loo adeegsadaa sida eey isboorti oo aad caan ugu ah bulshada ugaarsiga, sababtoo ah aaminsanaanta inay yihiin eeyo qoryo hibo leh.
Macluumaadka & Astaamaha Cunnada eeyaha ee loo yaqaan 'Bloodhound Dog Dog'
Dhiig-baxa waa nooc hore, asalkooduna ma cadda. Si kastaba ha noqotee, qarnigii 7aad, St. Hubert (ilaaliyaha ugaarsadaha) iyo wadaadadiisu waxay gacan weyn ku lahaayeen horumarinta taranka. Dhiig-baxa maanta ayaa weli ka diiwaan gashan FCI sida chiens du St. Hubert. Magaca 'Dhiig-qulqulka' waxaa laga soo qaatay ereyga 'dhiig-shub dhiig leh,' oo macnaheedu yahay ... Sii akhriso
Buluug Sanka Buluugga ah: Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato 'Eyga Dadka'
Ma xiiseyneysaa qulqulka sanka buluuga ah? Sii wad akhriska waxaanan kaa caawin doonaa inaad si qoto dheer u fahanto waxa godadka buluuga ah ee buluuga 'Blue Suts Pitbulls' ay runti yihiin!
Boerboels: Miyuu noocani yahay mid dagaal badan oo aan noqon karin eey qoys?
Farac ka mid ah eeyaha Molosser, Boerboel ama Koonfur Afrika Mastiff waa nooc kalsooni leh oo aan dib u laaban doonin si loo ilaaliyo adiga iyo qoyskaaga.
Xudduudka Collie - Maxaa Laga Filayaa Noocyadan Ey
Astaamaha ugu caansan ee Xeerarka Xuduudaha waa rabitaankooda ah inay ka shaqeeyaan wax kasta oo kale. Waxay daaqeen iyagoo madaxooda hoos u dhacaya, iyagoo idaha ku eegaya indho adag. Waxay ogaadaan dhaqdhaqaaq kasta oo xoolaha ah, waxayna ku falceliyaan iyagoo dhaqaaqa, mararka qaarkood si aan macquul ahayn, si ay uga faa'iidaystaan ​​ama uga hortagaan. Dhaqdhaqaaqa labadaba ... Sii akhriso
Xuduudaha Collie Australian Shepherd miyuu isku daraa mid ka mid ah eeyaha ugu fiican?
Eeyaha dhaqashada ayaa ah geedo aad u fiican, laakiin ka waran haddii aad isku dari karto laba nooc oo shaqo badan? La kulan Xuduudaha Collie Australian Shepherd mix AKA Border Aussie.
Shollie: Dhamaanba waxa ku saabsan Xuduudaha Collie Jarmalka Shepherd Mix
The Border Collie German Shepherd Mix waa isugeyn tamar sare leh oo ku habboon qoysaska firfircoon. Soo ogow waxa Shollie ka dhigaya xayawaan weyn.
Wax Kasta Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Isku-Darka Xadka Collie-Lab
Isku darka sirdoonka Xudduudda Collie iyo Labrador Retriever ee caruurta saaxiibtinimada leh, waxaadna heli doontaa isku darka Xudduudka Collie Lab ee AKA Borador!
Ma rabtaa inaad hesho ey ey firfircoon, caqli badan, oo ba'an? Ha u sii eegin, soo bandhigida isku darka Xadka Collie Blue Heeler. Halkan ka aqri dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato eygan cajiibka ah.
Boston-Terrier-ka Mareykanka oo dhami ma eey kuu fiican baa?
Boston Terrier-ka yar laakiin murqaha leh aad baa adduunka looga jecel yahay. Sii wad akhriska si aad u ogaato wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan cunuggan feisty.
Bordoodles waa eeyo wanaagsan, laakiin miyuu kugu habboon yahay adiga?
Haddii aad jeceshahay eyga ugu caqliga badan adduunka iyo kuwa ugu caansan ee timaha jilicsan sida asxaabtaada bakhaarka, ka dib soo qaado Border Collie Poodle mix (AKA Bordoodle).
Maxay isku darka Boston Terrier Pug kuu farxad galin doontaa adiga
Ma isweydiineysaa haddii isku darka Boston Terrier Pug (AKA Bugg) uu yahay xayawaanka kuugu habboon adiga? Maqaalkan tilmaamaha ah ayaa kaa caawin doona inaad go'aansato haddii eeygan uu ku habboon yahay qaab nololeedkaaga.
Wax Kasta Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Feeryahan-Ruuxeedu Sareeyo
In kasta oo muuqaalkoodu murqaha yahay iyo muujinta murugsanaanta murugada leh, Feeryahannadu waa kuwo la jecel yahay, xamaasad sarreeya, firfircoon, ilaalin leh, oo xanaaqsan.
Waa maxay Ey Boggle: U fiirso Boodhadh Beagle Mix
Isku darka Boxer Beagle waa eey jecel-xiiso leh oo tamar u leh inuu badbaadiyo. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan isweydaarsigan iyo sababta ay ugu habboon tahay qoysaska firfircoon.
Bulloxer: Waa maxay eeyga isku-darka Boxer Bulldog?
Noocyada cagajuglaynta mid walbaa wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah, laakiin ka warran haddii aan isla gudubno? Waxaan jeclaan lahayn inaad la kulanto Boxer Bulldog mix (AKA Bulloxer).
Raadi sababta Boxerdoodles ay u jecel yihiin oo ay daacad u yihiin
Boxerdoodle ma kuu yahay Doodle kugu habboon adiga? Ka ogow wax badan oo ku saabsan iskudhafka feerka 'Boxer Poodle', iyo waxa u noqon doono inuu yeesho fido this.
Magacyada jarmalka ee haweenka adhijirrada Jarmalka
sidee loo xidhaa suunka ilmaha yar
eyga maltese shih tzu
waa maxay Terrier mix dog
intee le'eg bay yihiin kareemka ingiriisiga dahabka soo-celinta